Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-31 05:55:21
အမှုမှာ စွပ်စွဲထားတာက ပုဒ်မ ၅၀၀ ဖြစ်တယ်။ ဒါက နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဗုံးပေါက် ကွဲသလို အမှုမျိုးလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် အမှုကို ပုံမှန် သူ့ရက်ချိန်း အတိုင်းပဲ စစ်ဆေးပေးပါလို့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေက တရားရုံးကို တင်ပြတယ်
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် via National League for Democracy’s Facebook Wall http://www.facebook.com/NLDParty/posts/1041244772557590 https://www.facebook.com/
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-31 03:45:39
Three Activists Arrested For Anti-Mine Protest in Yangonwww.irrawaddy.orgActivist Naw Ohn Hla speaks to reporters duringaprotest in Rangoon against the shooting death ofaprotestor at the Letpadaung mine project site on Dec. 22.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-29 07:36:14
သာယာဝတီထောင် Anti-labour တိုက်ပွဲ ငွေရတုအခမ်း အနားနှင့် သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းစာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း မှ သာယာဝတီထောင် Anti-labour တိုက်ပွဲ ငွေရတုအခမ်း အနားနှင့် သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းစာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-24 10:26:54
DVB – ဒေါ်ခင်ဝင်း သေနတ်ထိမှန်သေဆုံးကြောင်း မှုခင်းဆရာဝန် အတည်ပြု
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ပဋိပက္ခအတွင်းက သေဆုံးသွားတဲ့ မုိုးကြိုးပြင် အလယ်ရွာသူ ဒေါ်ခင်ဝင်းဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်လုိုက်တဲ့ သေနတ်ကျည်ဆန်ကြောင့် သေဆုံးတာ …
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-24 10:23:46
မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ လက်ပတောင်းဒေသပဋိပက္ခ မြင်ကွင်း
ရုပ်အလောင်းအား မခွဲစိပ်မီ မှတ်တမ်းတင်နေကြစဉ်
ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-24 10:09:28
Yangon Police Charge Ko Ko Gyi,5Other Activists for Unauthorized Protestwww.irrawaddy.orgRangoon police bring criminal charges against five activists, including prominent 88 Student Generation leader Ko Ko Gyi, who are accused of holding an unauthori…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-24 10:03:19
More Villagers Injured in Letpadaung Mine Protestswww.irrawaddy.orgThree people were injured after police used rubber bullets to quell protests in the same village whereawoman was shot and killed on Monday.
ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တွေ့ရှိရသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြေညာချက် အမှတ်…
ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တွေ့ရှိရသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြေညာချက် အမှတ် ၂၂/၁၂/၁၄ သည် အတုအယောင်သာဖြစ်ပါသည်။ ကြည်တိုး အဖွဲ့ဝင် ဗဟိုပြန်ကြားရေးဌာန via D-Wave’s Facebook Wall…
ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း နိုင်ငံရေးနဲ့ သတင်းလောကမှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ဖြစ်သွားစေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးရဲ့ ပြောစကားတွေပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့…
နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်မှု အတွက် ငွေကြေးဖောင်း ပွမှုလိုအပ်ဟု ဗဟိုဘဏ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဆို
နိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ငွေကြေးဖောင်းပွ မှုလိုအပ် သည်ဟု ဗဟိုဘဏ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆက်အောင်က အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး…
ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းthevoicemyanmar.comတောင်ငူမြို့နယ် စည်ပင်ဂိုဏ်းအုပ် စာသင်တိုက်တွင် ကျင်းပသည့် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသားတပ်မတော် ကျဆုံးစစ်သည်များ၏ မိသားစုဝင်များအား အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြ… via The…
ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများ တွေ့ဆုံပြီးနောက် မီဒီယာများအနေဖြင့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများကို ဆင်ခြင်ကြရန် တပ်မတော်ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်လာသည့် ဗိုလ်မှူးများက ထောက်ပြပြောဆို လိုက်သည်။ “တပ်မတော်မှာ အတိုကောက်ခေါ်ဖို့…
ယနေ့မြန်မာနိုင်၏ အခြေအနေသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ဟု ဆိုသော်လည်း သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိသေးကြောင်း နိုင်ငံတကာ မြန်မာ့သတင်း BNI က ဦးစီးပြုလုပ်သည့် Online Media For…
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းဧရိယာမှာ ရဲနဲ့ ဒေသခံတွေအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ရာမှာ ရဲက သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်လို့ အသက် ၅၀ အရွယ် ရွာသူတဦး[…] The post လက်ပံတောင်းပဋိပက္ခတွင် ရဲပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး…
ချောင်းသာ ကမ်းခြေတွင် ဈေးရောင်းခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဈေးသည်များ ဆန္ဒပြ
ချောင်းသာ ကမ်းခြေတွင် ဈေးရောင်းချခွင့်ကို ဒေသအာဏာပိုင်တို့က ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဈေးသည် တစ်ရာကျော် က ချောင်းသာရှိ ဟိုတယ်များရှေ့နှင့် ကမ်းခြေသောင်ပြင်တို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။…